Dagaal dhexmaray Ciidanka Kenya iyo Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dagaal dhexmaray Ciidanka Kenya iyo Shabaab
Dagaal dhexmaray Ciidanka Kenya iyo Shabaab
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac geystay oo Ciidanka Kenya iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ku dhexmaray degaanka Faxfax-dhuun oo ka tirsan Gobolka Gedo.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisin Ciidanka Kenya ay ku leeyihiin degaanka, waxaana halkaasi dhinacyadan ku dhexmaray dagaal qaatay wax ka badan saacad.
Dadka degaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay arkayeen xoogag Shabaab ka tirsan oo aad u hubeysan kuwaasi oo marqura weerar ku galay saldhiga Ciidanka Kenya, intaasi kadibna uu xigay dagaal kulul oo labada dhinac dhexmaray.
Waxaa kaloo jirtay inta uu dagaalka socday in guutada jugta culus ee ka tirsan Shabaab ay rideen Madaafiic dhawr ah, iyada oo Ciidanka Kenya si la mid ah iyaguna ay ku jawaabeen Madaafiic kale, kuwaasi oo ku dhacay meel banaanka ka ah degaanka.
Khasaare dhimasho iyo dhaawaca ah oo labada dhinac soo kala gaaray ayaa dagaalkan ka dhashay, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqjiin Karin hasaaraha dhabta ah, balse Shabaab oo weerarka uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen in ay khasaare gaarsiiyeen Ciidana Kenya.
Degaanka Faxfax-dhuun ayaa qiyaasti 70-KM u jira magaalada Baardheere oo sanaddii la soo dhaafay 2017 ay isaga baxeen Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya.